Faahfaahin Dagaalkii Kismaayo ku dhexmaray ciidamada Axmed Madoobe iyo Seeraar | Xaysimo
Home War Faahfaahin Dagaalkii Kismaayo ku dhexmaray ciidamada Axmed Madoobe iyo Seeraar
Faahfaahin Dagaalkii Kismaayo ku dhexmaray ciidamada Axmed Madoobe iyo Seeraar
Iska hor-imaad u dhaxeeyey ciidamada Jubaland iyo kuwa siyaasi Cabdi Naasir Seeraar, oo sheegtta inuu yahay madaxweynaha Jubaland, ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkan uu yimid kadib markii taageerayaasha Cabdi Naasir Seeraar ay billaabeen banaanbax ka han ah Axmed Madoobe, hayeeshee uu rasaas ku ridey askari ka tirsan Ciidamada Jubaland, oo doonayey inuu dibad-baxa joojiyo.
Bannaanbaxayaasha oo haween u badnaa ayaa ku qaylinayay hal kudhigyo liddi ku ah Maamulka Jubbaland, taasoo aad mooddo in lagu diidan yahay kulanka Madaxweynaha Jubbaland iyo wafdiga uu hoggaaminayo Safiirka Mareykanka ee Somaliya, Amb. Donald Yamamoto.
Ciidan u daacad ah Cabdinaasir Seeraar Maax, Afhayeenkii hore ee Maamulka Jubbaland oo hareer socday bannaanbaxayaasha ayaa iska horimaad toos ah la galay Ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida Jubbaland.
Iska horimaadkan oo muddo 40 daqiiqo ka socday xaafadda Farjano ayaan ku fidin qaybaha kale ee Magaalada Kismaayo.
Ciidamada Jubbaland ayaa u muuqdo inay hadda ka itaal roonaadeen maleeshiyadii Cabdinaasir Seeraar, isla-markaana ay fashiliyeen bannaanbaxayaashii uu wadooyinka isugu soo saaray.
Dhanka kale warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iska horimaadkan. Wararka qaar waxay sheegayan in saddex qof ay ku dhaawacantay oo laba ka mida ay dumar yihiin, halka midka kalena uu yahay askari ka tirsan Ciidamada Jubbaland, warar kalena waxay sheegayan in hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacantay.
Wariye-yaasha Magaalada Kismaayo ayaa soo sheegaya in khasaaraha uu ka badan karo faah faahinta horudhaca ahi ee iminka laga helayo.
Si kastaba ha-ahaatee bannaanbaxan lagu hakiyay Magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay abaabulkeedu laheyd Dowladda Federaalka.